Inside Story: उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे कुन सक्तिको आडमा राजिनामा नदिने अड्डि कसेकी हुन ? - TodayKhabar
काठमाडौ । सभामुख चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा सभामुख चयनका लागि गरिएका सबै प्रयासहरु बिफल हुँदा आज तेस्रो पटक सुचना टास गरि संसद स्थगन गर्नु पर्यो ।
तत्कालीन माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट उपसभामुख भागबन्डामा परेको थियो । तर पार्टी एकता हुदा दुबै पद एउटै पार्टीबाट हुन नसक्ने संबैधानिक ब्यबस्था रहेको छ । यता, नेपाली काङ्ग्रेस लगातार यो विषय उठाएर सरकारमाथी सृजना गरि रहेका थिए ।
यो बीचमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रकरण पछि सभामुख पद खाली भएपछि कसलाई उक्त पदमा चयन गर्ने बिषय नेकपाको लागि फलामे च्युरा साबित भएको छ ।
यता, उपसभामुख डा. शिबमाया तुम्बाहाम्फे आफुलाइ सभामुख बनाउनु पर्ने दाबि गरि रहनु भएको छ । तर, नेकपा भित्र उनलाइ राजिनामा दिन दबाब दिइ रहेका छन ।
उनले आफुलाइ सभामुख नबनाउने भए राजिनामा नदिने र संसद सन्चालान गर्ने अडान कायम राख्दा नेकपा अध्यक्षद्वयलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
उपसभामुखको सक्तीको श्रोत के हो ?
जनजाती समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुख क्षमताको कुरो गर्दा सो पदका लागि उपयुुक्त पात्र भए पनि अहिलेको राजनीतिक परिबेशमा उपयुक्त भुमिका खेल्न नसक्ने ठहर गर्दै अन्य पात्रलाई सभामुख बनाउनु पर्ने बुझाइ हो ।
पार्टी भित्र तत्कालीन माओवादी खेमाले सभामुख आफ्नो समुहबाट हुनु पर्ने अडानले पनि यो प्रक्रिया लम्बिन पुगेको भनाइ छ ।
यस बिचमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फे कुन सक्तीको आड्मा राजीनामा नदिने अड्डि कसेकि हुन भनेर नेकपा भित्र चर्चाको विषय बनेको छ । एक पक्षले राजीनामा दिनै पर्ने दाबी गरि रहदा नेकपाका अर्को पक्षले शिबमाया तुम्बाहाम्फेको पक्षमा उभिएको श्रोतले बताए । कतिपयले उपसभामुखलाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सक्तीको सहयोग त छैन भनेर शंका आशंका समेत गरिन थालिएको छ ।
कतिपयले पुर्ब माओवादी समुहबाट सभामुख पाउनु पर्ने अडानले नेकपाका नेताहरुले पनि गोप्य तरिकाबाट राजीनामा नदिन शक्ति प्रदान गरि रहेको श्रोतको दाबी छ ।
उपसभामुखको राजिनामा हालसम्म नआउनुलाई नेकपाका कयौँ नेताहरुले देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको चलखेलको आशंका गरेका छन् । “विद्यमान संसदीय प्रणालीलाई नै असफल बनाई देशमा अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउनको निम्ति कोही लागेको त छैन ?” नेताहरुको प्रतिप्रश्न छ । पार्टीले बनाएको उपसभामुख पार्टी हित विरुद्ध लाग्न खोज्नु संसदीय इतिहासमै दोस्रो दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको टिप्पणी नेताहरुले गरेका छन् ।
आठजना भारतीय नागरिकको मृत्यु : सबैको खुल्यो पहिचान (नामसहित)
अनिर्णयको बन्दी बन्दै कांग्रेस, भागबन्डामा ‘बार्गेनिङ’
कोरोना विश्वव्यापी माहामारीः संक्रमितको संख्या २ लाख बढी, इरानमा एकै दिन १४७ जनाको मृत्यु
क्यानडाका प्रधानमन्त्री श्रीमतीसहित क्वारेन्टाइनमा